आयोगलाई भत्काउने कि सपार्ने ? (लोकसेवा उपयोगी) – Rajdhani Daily
आयोगलाई भत्काउने कि सपार्ने ? (लोकसेवा उपयोगी)
संसदमा पेस भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । आयोग स्थापना भएदेखि उपयोग गरेका स्वायत्ततासम्बन्धी आयोगको प्रशासनिक अधिकार कटौती गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नुको अर्थ के हो भन्ने चर्चा अहिले बौद्धिक प्रशासनिक क्षेत्रमा मडारिएको छ । सरकार लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेर आयोगलाई आफनो विभाग बनाउन र कमजोर बनाउन चाहन्छ र ? भन्ने समाचार मिडियामा छाएको छ ।
आयोगबाट पेस गरिएको विधेयकबाट संघीय निजामती सेवाका लागि देशभरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न कार्यालय खोल्ने विषय, लोकसेवा आयोगमा भित्रिने र बाहिरिने कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा आयोगको सहमति चाहिने प्रावधान, आयोगका विविध शीर्षकमा विनियोजित हुने बजेट र सोको आवश्यकताअनुसार बाँडफाँड गर्ने र काम गरेपछि दिइने प्रोत्साहन सुविधा, तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्दा आउने बाधा अड्काउ फुकाउने आयोगको प्रशासनिक अधिकार मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कटौती गरेको छ ।
नेपालमा लोकसेवा आयोग मात्र एक यस्तो निकाय हो, जो गीता दर्शनअनुसार आफ्नो कर्तव्य निरूपण गर्न सफल छ । आफैं तालिका बनाएर काम गर्छ र तोकिएको समय सीमाभित्र पूरा पनि गर्छ । आयोगको काम गराइले सर्वसाधारण नेपाली जनता र सरकार दुवैको विश्वास आयोगले आर्जन गरेको छ । यसैले होला नेपालको संविधानमा आयोगको काम फराकिलो बनाइयो । संविधानले आयोगलाई अन्य सरकारी सेवाको पदपूर्तिको काम दिएको केही सभ्रान्तवर्गलाई रुचि नभएको पनि बुझियो ।
निजामती सेवाभन्दा अन्य सरकारी सेवाहरूको पदपूर्तिलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र मेरिटमा आधारित बनाउन आयोगले सामान्य सिद्धान्त बनाएर सबै निकायको विनियमावलीमा संशोधन गर्न अनुरोध ग¥यो । त्यो पनि धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मन पर्न सकेन । आयोगको सबै कार्य विज्ञमा आधारित हुन्छ । आयोगले विषयविज्ञलाई काममा लगाउँछ र सो कार्यको पारिश्रमिक दिन्छ ।
काम गर्न बजेटको आवश्यकता हुने भयो त्यो पनि पचेन । बरु बुझ पचाएर वा होच्याएर आयोगले कन्सल्टेन्सी गर्ने गरेको भन्न पनि केही व्यक्तिहरू पछि परेनन् । बिस्तारै आयोगको कार्यसम्पादनको यश क्षयीकरण गर्न एउटा जमात सरकारको वरिपरि खडा भयो । उनीहरूको काम आयोगलाई हाेंचो बनाएर आफू अग्लो हुने एउटा दुस्साहस मात्र थियो । तर, सफल भएन । त्यसपछि त्यो जमात आयोगको ऐनको पछि लाग्यो र सरकारलाई लोकसेवा आयोगविरुद्ध पढाउन थाल्यो ।
सरकारका निर्णयहरू आजकल बढी स्वार्थ समूहका हित अनुकूल हुने प्रवृति बढेको र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव घट्दै गएको छ । लोकसेवा आयोगलाई कमजोर बनाउन उद्यतवर्गले आफ्नो पहुँच बिस्तारै सरकारसम्म पु¥याउन सफल भयो ।
आयोगको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको विधेयकमा चलखेल गर्न त्यो सभ्रान्तवर्ग खुलेर लाग्यो । आयोगको कार्यसम्पादन स्तर भत्काउन र आयोगलाई दिएको काम आफंै फिर्ता लैजाने उद्देश्यले प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्न सफल पनि भयो । यसरी सरकारलाई झुक्याएर आयोगको भइरहेको ऐनभन्दा अलग विधेयक बनाएर आयोगलाई भत्काउने योजना बनेको देखिन्छ । विधेयक सच्याइएन भने आयोगले आफनो काम प्रभावकारी एवं समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने स्पष्टै छ ।
सरकार खास राजनीतिक विचारधाराको आधारमा निर्वाचित भई आउने एक इमोसनल संस्था हो । सरकार इमोसनल हुन्छ र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ला कि ? भनेर प्रजातान्त्रिक संविधानमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू खडा गरिएको हुन्छ । शासन प्रणाली परिवर्तन भइरहँदा पनि संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले आफनो कार्यसम्पादन निरन्तर र निष्पक्ष रूपमा गर्दै आयो । आयोगको काम गराइमा आजसम्म कसैले औंला उठाउन सकेको छैन । सरकार र जनताले पत्याएको निकाय हो, लोकसेवा आयोग ।
बिस्तारै आयोगको कार्यसम्पादनको यश क्षयीकरण गर्न एउटा जमात सरकारको वरिपरि खडा भयो । उनीहरूको काम आयोगलाई होचो बनाएर आफू अग्लो हुने एउटा दुस्साहस मात्र थियो । तर, सफल भएन । त्यसपछि त्यो जमात आयोगको ऐनको पछि लाग्यो र सरकारलाई लोकसेवा आयोगविरुद्ध पढाउन थाल्यो
आयोगको समाजमा आर्थिक एवं सामाजिक महŒव उच्च रहेको छ । सामान्य जनताका छोराछोरीले कसैलाई भनसुन नगरिकन आफ्नै बलबुतामा जागिर खान र उच्च तहसम्म पुग्न सकेका छन् । मेधावी युवालाई भरोशा दिएको छ । छरिएर रहेका जनतालाई शासनप्रणालीमा सहभागी गराएको छ । परिणामस्वरूप लोकसेवा आयोगले राष्ट्रप्रति र सरकारप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाएको छ ।
लोकसेवा आयोगको छवि प्रत्येक शिक्षित युवामा गडेर रहेको छ । ऊ कलेज प्रवेशसँगै आयोगको परीक्षा दिएर सरकारी जागिर खाने योजना र आकांक्षा बुन्ने गर्छ । परीक्षामा फेल हुँदा आफ्नो तयारी नपुगेको हो भन्ने विश्वास गर्छ । आयोगको आलोचनाको प्रतिकार गर्छ । यसर्थ, प्रत्येक शिक्षित युवा आयोगका रक्षक हुन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगको बाटो भएर गुज्रनु पर्ने भएकाले आयोगले युवाको ठूलो जत्थालाई सरकारी रोजगारीका लागि इङ्गेज गराएर राखेकाले उनीहरूलाई भड्किन, विदेशिन र सरकारको विरोधमा लाग्नबाट समेत रोकेको छ ।
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षणका लागि परीक्षा लिने लोकसेवा आयोग अहिले आफंै परीक्षाको घडीमा पुगेको छ । आयोगको ऐन निर्माणको विषयले चर्चा पाएको छ । आयोग स्थापित प्रणालीमा चलेको र चल्ने निकाय हो । आयोग मेरिट र विधिमा विश्वास गर्छ । आयोगको आफ्नै ऐन छ, कार्यविधि छ, आचारसंहिता छ । सोहीेअनुरूप परिचालित हुन्छ । आयोगले विज्ञको सेवा लिन्छ । आयोगको काममा विज्ञ भएकामा विज्ञहरू गर्व गर्छन् । कुन पदको कहिले विज्ञापन हुन्छ र कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा परीक्षाको तयारी गर्ने सबै उम्मेदवार र विज्ञलाई जानकारी हुन्छ । प्रशासनिक समाजमा आयोगको कार्यतालिका नै एक संस्कृति बनेको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगले तत्कालै आफनो ऐन परिमार्जन गर्न मसौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, सभ्रान्तवर्गको स्वार्थका कारण झन्डै दुई वर्षपछि बल्ल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भयो ।
आयोगका प्रशासकीय अधिकारहरू काटेर विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ । स्थापनाकाल २००८ सालदेखि नै लोकसेवा आयोगले उपभोग गर्दै आएकोे प्रशासकीय अधिकारसम्बन्धी प्रावधान सच्याउन संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता गरी सच्याई पाऊँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्रमार्फत अनुरोध
सारमा, लोकसेवा आयोगको प्रशासकीय अधिकार काटेर संसद्मा विधेयक पेस हुनु सरकार र तमाम जनताका लागि दुःखद कुरा हो । अधिकार काटेपछि आयोगको कार्यसम्पादन स्तर स्वतः प्रभावित हुन्छ । परीक्षामा उच्च गुणस्तर र गोप्यता कायम गर्न कठिन हुन्छ । विज्ञमा आधारित आयोगको काममा विज्ञको सेवा लिन सकिँदैन । लोकसेवा आयोगको मर्ममाथि चोट पर्नु भनेको आमजनताको आस्थामाथि नै प्रहार गर्नु हो । यस घडीमा अब लोकसेवा आयोगलाई भत्काउने हो र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तर, कोहीे पनि लोकसेवा आयोग भत्कियोस् भन्ने चाहँदैनन् । आयोगको प्रशासकीय अधिकार कटौती वा सीमित गर्ने प्रयास आयोगलाई भत्काउने क्षुद्र स्वार्थ समूहको निकृष्ट खेल मात्र हो । सार्वजनिक नीति वा कानून बनाउँदा नीति निर्माताहरूले त्यसबाट पर्ने प्रभावको अनुमान र अध्ययन गर्न सकेनन् भने स्वार्थ समूह हाबी हुन्छ । नकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । यसकारण संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी लोकसेवा आयोगको परामर्शमा परिमार्जन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।
Tags: आयोगलाई भत्काउने कि सपार्ने ?